မနက်က ရွှေတိဂုံ ဘုရားအနီး ကြက်သီးထဖွယ်မြင်ကွင်းတစ်ခု – Shwe Yaung Lan
HomeKnowledgeမနက်က ရွှေတိဂုံ ဘုရားအနီး ကြက်သီးထဖွယ်မြင်ကွင်းတစ်ခု
မနက်က ရွှေတိဂုံ ဘုရားအနီး ကြက်သီးထဖွယ်မြင်ကွင်းတစ်ခု
January 26, 2021 Writer Magic Knowledge 0
” ​​ချယ်ရီပန်း​တွေ ပွင့်မယ့် အစား …….”
မနက်က​ရွှေတိဂုံ ဘုရားအနီး မှာတက္ကစီ တစ်စီးပျက်သွား​တော့ လမ်း​တွေ ပိတ်တာ​ပေါ့….ပျက်သွားတဲ့ တက္ကစီ ကို ယာဥ်​မောင်းက တစ်​ယောက်တည်း တွန်းတယ်…..ကုန်းတက်ကြီး ဆို​တော့ ဘဘယ်အဆင်​ပြေပါ့မလဲ ……..အနီးမှာရှိတဲ့ ယာဥ်ထိန်းရဲက ​ပြေးလာပြီ ကူတွန်းတယ်……..
ထင်သ​လောက် မတွန်းနိုင်ဘူး……..အဲဒီမှာ လက်တစ်ဖက် မရှိတဲ့ သတင်းစာ ​​ရောင်းသည် က ​ပြေးလာပြီ ကူတွန်းတယ်……….တစ်ဆက်တည်း ပန်းသည် ရယ် ၊ ကွမ်းယာသည် ရယ်ကပါ ဝိုင်းတွန်း​တော့ ​နောက်ဆုံး ပျက်​နေတဲ့ တက္ကစီ
ကုန်း​ပေါ် ​ရောက်သွား​တော့တယ်……လမ်းပိတ်​နေတာကလည်း ရှင်းသွားတယ်…….
ကိုယ်လည်း ဖုန်း အမြန် ထုတ်ပြီးမှတ်တမ်းတင် လိုက်တယ်…..ကားကို ဝိုင်းတွန်းတဲ့တစ်ဦးတစ်​ယောက်ချင်းစီ ကို ​လေးစားတယ်…….တကယ်​တော့ သူတို့ နဲ့ မဆိုင်သလို ​နေလို့ရတာ​ပေါ့…………ဒါ​ပေမဲ့ ……….
ကိုယ်စီ အသိစိတ် နဲ့ ​ပြေးလာပြီး တစ်​ယောက်တစ်ဖက် တစ်​ယောက်တစ်လက် နဲ့ ဝိုင်းကူညီ​တော့ ​နောက်ဆုံး ကားပိတ်တာကြီးကို ​ဖြေရှင်းသွားနိုင် တယ်…..အခု မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်​နေတဲ့ ပြသနာ​တွေဟာ ကျွန်​တော် တို့ အတူတူ မရှိဘူးကြ​သေးလို့ပါကျွန်​တော်တို့ အတူတူး မတွန်းရ​သေးလို့ပါကျွန်​တော်တို့ အတူတူ လက်ဆွဲမနှုတ်ဆက်ရ​သေးလို့ပါ
လာပါ လက်သီးဆုပ်​တွေ ဖြည်ပြီး လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးကျွန်​တော် တို့ အတူတူ………………..ကုန်း​ပေါ် တက်မယ်​လေ……….
ကျွန်​​တော်တို့ လက်​​​တွေ စုပြီး ကဗျာ တစ်ပုဒ်​ ချရေးမယ်……..
ကြိုက်တဲ့ ​ခေါင်းစဥ် တပ် ငြိမ်းချမ်း​ရေး အ​ကြောင်း​တွေ ပါ​ ပါ​စေ…….စာလုံး​ပေါင်း ​တွေ မှား လည်းရတယ် ဂျိုးဖြူငှက်​တွေ အ​ကြောင်း ​တော့ပါ ပါ​စေ……ဒီမှာ ရှမ်းကြီးမရှက် နဲ့ ခင်ဗျားက အစ်ကိုကြီးဆိုကျုပ်က ညီငယ်​လေး…….ပန်း​တွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပွင့်ပါ​စေ……..
ကချင်ကြီးရယ်…..ဟာခါဘိုရာဇီ ​တောင်တန်းကြီး ပိုလှတာ​ပေါ့…..တို့ တိုင်းရင်းသား​တွေ ဘယ်သူပဲ ဗိုလ်လုပ်လုပ်​သေနတ် မပါ​ကြေး………​နော် ဟိုး….မှာ ​တွေ့လား တက္ကစီ ဆရာ အပါအဝင် ယာဥ်ထိန်းရဲကြီးရယ်၊ လက်တစ်ဖက်ပဲ ရှိတဲ့ သတင်းစာ​ရောင်းသည်ကြီးရယ်၊ ပန်းသည်ကြီးရယ်၊ ကွမ်း​ရောင်းတဲ့ ညီ​လေးရယ်ကကုန်း​ပေါ်က လက်ပြ​နေပြီ……..
ပြည်တွင်းစစ်​တွေ ရပ်ဆဲပြီး ငြိမ်းချမ်း​ရေး ​တောင်​ပေါ် ကို ကျုပ်တို့ ​ပြေးတက်ရ​ ​အောင်ဗျာ……
​ဆောင်းတွင်းမို့ ​အေး တယ်တဲ့ လား ရခိုင်ကြီး​ရေ…..
ဒါဆို ​ကျောပိုးထား…….ကျုပ်​တို့ ပြေးတက်​ ​တော့မယ်​နော်…
ချယ်ရီ ပန်း​တွေ………….အစား သ​ပြေပန်း​တွေ ပွင့်​နေပြီ…………….တဲ့ဒီလမ်း ဘယ်​​လောက် ကြမ်းကြမ်း ကျုပ်တို့ ရ​အောင် တက်မယ်ဗျာ……
သင့်ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေက အရမ်းကြောက်တဲ့ အမူအကျင့်များ
အရှင်လတ်လတ် နှစ်နဲ့ချီ တည်ရှိနေတဲ့ အသက် (၅) နှစ်ကလေး လည်ချောင်းထဲက မျှော့